deafnepal - National Federation of the Deaf - Nepal (NDFN)
All posts by deafnepal
के कोरोना भाइरस लागेपछि निको हुदैन?
by deafnepal	 April 20, 2020
अहिले सम्म विश्वमा २० लाख भन्दा बढिमा कोरोनाको संक्रमण भएको छ भने ५ लाख जति निको भइसकेका छन् त्यसकारण यो लाग्दैमा डराउनु हुदैन । तर सुरक्षाका उपायभने अपनाउनु पर्छ । यसको लक्षण देखा परे समयमै सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस ।
के कोरोना भाइरस ल्याबमा बनाएको हो ?
यो कुरा साबित गर्ने कुनै प्रमाण छैन । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार यो भाइरस पहिला चमेरा बाट सुरु भएको हो र त्यसबाट मानिसमा संक्रमण सुरु भएको हो । यो पहिलो पल्ट चिनको बुहानमा देखिएको हो ।
के कोरोना भाइरस घरेलु उपचारबाट नै निको हुन्छ ?
कोरोना भाइरस घरेलु जडिबुटि, लसुन, प्याज आदि खाएमा निको हुन्छ भन्नु गलत हो । यद्धपि लसुन प्याज लगायतका अन्य जडिबुटि स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छन तर यसले कोरोना बाट बचाउदैन ।
के रक्सि पिउनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुदैन ?
रक्सि पिउनाले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुदैन भन्ने गलत हो । बरु रक्सि पिउनाले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमत कम हुन जाने र अन्य बेफाइदा हुन्छ ।